» दोहोरी च्याम्पियनको सेमिफाईनलमा कुन जोडी पुग्ला ?
दोहोरी च्याम्पियनको सेमिफाईनलमा कुन जोडी पुग्ला ?
२५ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०७:५६
मकवानपुर, २५ भदौ । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को सेमिफाईनलमा पुग्ने पहिलो जोडीको नाम यही शनिबार सार्वजनिक हुँदैछ । सेमिफाईनल अर्थात उत्कृष्ट ४ का लागि गएको शनिबार सरोज सिम्खडा र सिता घिमिरेसँग सविन आचार्य र रिता रावत क्षेत्रीले दोहोरी भिडेका थिए । यी दुबै टिमले गत साता गरेको दमदार दोहोरी भिडन्तका कारण कुन टिम सेमिफाईनलमा पुग्लान् भनेर सहजै अनुमान लाउनसक्ने अवस्था छैन । दोहोरी भिडन्तका क्रममा गत साता सरोज र रिताको कडा दोहोरी भिडन्त भएको थियो ।
त्यस्तै सविन र सिताका बिचमा पनि विछोडको परिस्थितिका बारेमा दोहोरी भिडन्त भएको थियो । विषयवस्तुका हिसाबले रिता र सरोजको दोहोरी भिडन्त चर्काचर्की किसिमको सुनिन्थ्यो भने सविन र सिताको पनि मार्मिक विषयमा बलियो दोहोरी भिडन्त भएको थियो ।
यी दुबै टिमले यसअघिको दोहोरी भिडन्तका क्रममा दर्शक र निर्णायकहरुबाट प्रशंसा पाएका थिए । गएका दोहोरी भिडन्तहरुमा जस्तै यो साता पनि यी दुबै टिमले दर्शक श्रोताको मन जितेका थिए । तर यो सातादेखि दर्शक भोटका आधारमा मात्र सेमिफाईनलमा पुग्ने जोडी तय हुने भएकोले कुन जोडीले दोहोरी जित्लान् भनेर दर्शकहरुकै हातमा निर्णय रहेको देखिन्छ । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट ४ अर्थात सेमिफाईनलमा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–